भुरिगाउँ, बर्दिया । के तपाईं आँखासम्बन्धी रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्छ? के तपाईं पैसाकै कारण आफ्नो ज्योतिलाई अन्धकारतर्फ डोर्‍याउदै हुनुहुन्छ ? वा टाढा जान नसकेर बसिरहनु भएको छ ? यदी हो भने अब ढुक्क हुनुहोस्। ठाकुरबाबा नगरपालिकाले तपाईंकै घरदैलोमा यी सबै समस्याको समाधान गर्दैछ। बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा आँखा छनोट शिविर र मोतिबिन्दु अप्रेशन शिविर हुने भएको छ । तिलगंगा [पूरा पढ्नुहोस्]